HUANET ONU Vagadziri | China HUANET ONU Fekitori & Vatengesi
HUANET 1GE GPON ONT ONU HG911A ine Anatel Certification
Anatel Nha. 069627-21-12314
HZW-HG911A (HGU) iri mini GPON ONT chinouraya mudziyo, iyo inoshanda kune yakachena Broadband access.It adopts mini-mhando compact compact dhizaini ine yakakwira-kubatanidzwa uye inogona kupa 1 GE（RJ45）interfaces. Inotsigira iyotekinoroji yeyakagadzika 2 Ethernet switch uye zviri nyore kuigadzirisa uye kuitisa.Inogona kuiswa kuFTTH / FTTP yekuwanira kunyorera kwevagari uye vebhizinesi vashandisi.uye inoenderana zvizere kune tekinoroji mitemo senge ITU-T G.984.x uye technical chinodiwa cheGPON Equipment.
1GE + 1FE + CATV + hari + WIFI XPON ONU
HG623-FTW (HGU) ari G / EPON ONU chinoguma mudziyo , iyo yakagadzirirwa kuzadzisa FTTx uye katatu kutamba sevhisi kudiwa kweiyo yakamisikidzwa network opareta. Iri bhokisi rakavakirwa pane yakagadzika uye yakakura gigabit G/ EPON tekinoroji, iyo ine yakakwira chiyero chekuita nemutengo, uye tekinoroji yeRukanda 2/3,CATVuye yepamusoro VoIP zvakare. Iyo yakavimbika kwazvo uye yakapusa kuitarisira, iine yakavimbiswa QoS yebasa rakasiyana. Inoenderana zvizere nehunyanzvi mirau senge ITU-T G.984.x, IEEE802.3ah uye technical chinodiwa cheG/ EPON Zvishandiso.
1GE + 3FE + HOTI + AC WIFI GPON ONU ndeimwe yeakateedzana Gigabit Passive Optical Network mushandisi zviteshi kubva kuShenzhen Huanet Technologies Co, Ltd. Kuteerera neITU-T G.984 GPON yepasi rose chiyero, zvakanaka pakuyanana-pamwe nevazhinji veGPON OLT muindasitiri nerutsigiro ruzere OMCI. Nemutengo unoshanda, nyore kutumirwa, software yakagadzikana uye yakasimba basa mabhenefiti, inonyanya kukodzera FTTH (Fibhi kuMusha), uye inosangana nezvinodiwa zvehupamhi bhendi yekuwana network.
1GE xPON ONT ONU ine Router / Bridage ine Anatel Certification
Anatel Nhamba: 04266-19-12230
HZW-HG911 (HGU) iri mini xPON ONT chinongedzo chishandiso, icho chinoshanda kune yakachena Broadband access.It inotora mini-mhando compact dhizaini dhizaini ine yakakwira-kubatanidza uye inogona kupa 1 GE, RJ45, interfaces. Inotsigira tekinoroji yechikamu che2 Ethernet switch uye zviri nyore kugadzirisa nekugadzirisa Iyo inogona kuiswa kune FTTH / FTTP yekushandisa kunyorera kune vanogara uye vebhizinesi vashandisi. uye hwokugadzira chinodikanwa cheXPON
HZW-HG623-TW (HGU) iri XPON ONT chinouraya mudziyo, iyo yakagadzirirwa kuzadzikisa FTTx uye katatu kutamba sevhisi kudiwa kweiyo yakamisikidzwa network opareta. Iri bhokisi rakavakirwa pane yakagadzika uye yakura tekinoroji yeGigabit, iyo ine yakakwira chiyero chekuita nemutengo, uye tekinoroji yeRukanda 2/3, WDM uye yepamusoro mhando VoIP futi. Iyo yakavimbika kwazvo uye yakapusa kuitarisira, iine yakavimbiswa QoS yebasa rakasiyana. Inoenderana zvizere nehunyanzvi mirau senge ITU-T G.984.x uye hunyanzvi chinodikanwa cheXPON Equipment.
HG643-W (HGU) ari XPON ONT chinoguma mudziyo , iyo yakagadzirirwa kuzadzisa FTTx uye katatu kutamba sevhisi kudiwa kweiyo yakamisikidzwa network opareta. Iri bhokisi rakavakirwa pane yakagadzika uye yakakura gigabit XPON tekinoroji, ine yakakwira chiyero chekuita nemutengo, uye tekinoroji yeRukoko 2/3, Iyo yakavimbika zvikuru uye iri nyore kuitarisira, ine QoS yakavimbiswa yebasa rakasiyana. Inoenderana zvizere nehunyanzvi mirau senge ITU-T G.984.x uye technical technical ye XPON Midziyo.
GPON WAN chiteshi ne 1.244Gbps uplink / 2.488Gbps downlink yekubatanidza kumhanya
Inoshanda Ethernet WAN chiteshi ine 1.25Gbps bi-direction chinongedzo kumhanya
1x GE + 3FE Ethernet RJ45 Zviteshi
2 × 2 11n WIFI inotsigira 300Mbps yekubatanidza kumhanya
1x FXS RJ11 zviteshi zveIzwi service
1x USB madoko mumubati kana muoti modhi
DC 12V adapter, max 1A yazvino
-5 kusvika 50 ℃ anoshanda ambient tembiricha
HZW-HG643-FW (HGU) chinhu GPON ONT chinouraya mudziyo, iyo akagadzirirwa kuzadzikisa FTTx uye katatu kutamba basa kudiwa yakamisikidzwa network opareta. Iri bhokisi rakavakirwa pane yakagadzika uye yakakura gigabit GPON tekinoroji, iyo ine yakakwira chiyero chekuita nemutengo, uye tekinoroji yeRukanda 2/3, WDM uye yepamusoro mhando VoIP futi. Iyo yakavimbika kwazvo uye yakapusa kuitarisira, iine yakavimbiswa QoS yebasa rakasiyana. Inoenderana zvizere nehunyanzvi mirau yakadai seITU-T G.984.x uye zvekushandisa zvinodiwa zveGPON Equipment.
HG623-W (HGU) iri GPON / EPON ONT chinouraya mudziyo, iyo yakagadzirirwa kuzadzikisa FTTx uye katatu kutamba sevhisi kudiwa kweiyo yakamisikidzwa network opareta. Iri bhokisi rakavakirwa pane yakagadzika uye yakagwinya Gigabit GPON tekinoroji, iyo ine yakakwira chiyero chekuita nemutengo, uye tekinoroji yeRukanda 2/3, Iyo yakavimbika zvikuru uye iri nyore kuitarisira, ine yakavimbiswa QoS yebasa rakasiyana. Inoenderana zvizere nehunyanzvi mirau senge ITU-T G.984.x uye hunyanzvi chinodikanwa cheXPON Equipment.
Sfp C ++, Xfp Transceiver, Optical Fiber Module, External Modulation Transmitter, Huawei Olt Mutengo, Huawei Qsfp +,